Qorituurka cayaaraha Ohio oo la qabtay
Posted by shiikha on 28/01/2013 06:18:21
01/19/2013 Waxaa magaalada Columbus ee gobolka Ohio, ka dhacay qorituurkii ama iskuaadka kooxaha ka soo qaybgali doono tartan ciyeereedka sanadlaha ah ee ka dhaca gobolka Ohio kaa soo ah kii 13 tobnaad ee ka dhaca magaladaas. Tartankan waxaa sanadkan ka soo qaybgali doona 24 kooxood oo ka kala imaanaya waqooyiga America geesihiisa taas oo ay ka midtahay wadanka Canada. Ku was soo dadoodu ay tahay 13 iyo wixii ka hoosayso 18 iyo wixii ka koreeyo iyo dabcan odayaasha cuslaaday. waxaa intaas dheer in ay sanadkan tartankan ka soo qaybgali doonaan dhilinyarada kubada kolayga oo iyaguna ka kala imaan doona gobalo badan oo kala duwan oo ay ku jirto magalada Toronto kuwaas oo dadoodu ay tahay 15 iyo toban iyo wixii ka yar.
01/19/2013 Waxaa magaalada Columbus ee gobelka Ohio, ka dhacay qorituurkii ama iskuaadka kooxaha ka soo qaybgali doono tartan ciyeereedka sanadlaha ah ee ka dhaca gobolka Ohio kaa soo ah kii 13 tobnaad ee ka dhaca magaladaas. Tartankan waxaa sanadkan ka soo qaybgali doona 24 kooxood oo ka kala imaanaya waqooyiga America geesihiisa taas oo ay ka midtahay wadanka Canada. Ku was soo dadoodu ay tahay 13 iyo wixii ka hoosayso 18 iyo wixii ka koreeyo iyo dabcan odayaasha cuslaaday. waxaa intaas dheer in ay sanadkan tartankan ka soo qaybgali doonaan dhilinyarada kubada kolayga oo iyaguna ka kala imaan doona gobalo badan oo kala duwan oo ay ku jirto magalada Toronto kuwaas oo dadoodu ay tahay 15 iyo toban iyo wixii ka yar.
Waxaa iyaduna mudan in aan xusno in ay nagala soo qaybgali doonaan bahweenta sportiga ee north America. Ku waas oo magac iyo muuqaalba ku leh mushtamaca somaliyeed dhaxdooda iyo banaankeedaba. Ku waas oo iskugu jira macalimiin, garsoorayaal, maamulayaal, iyo ciyaartow hore. Sanadwalba waqtigan oo kale ayaa waxaa magalada Columbus ku soo qulqula dhalinta aad u tirobadan iyaga oo ka kala imaanaya gobolada kala duwan ee waqooyiga America ku waas oo iskugu imaanaya in ay isla tartamaan, isbartaan, waqtina wada qaataan, madaama laga yaabo in ay sanadkiiba mar is arkaan. iyagoo soo bandhigaya ciyaaro aa u heersaraysa iyo xirfad ciyaareed oo aad u qurux badan.
N.B: goor dhaw kala soco halkan qaabka ay cayaarahaasi u dhici doonaan.